a - TECHNOMANIAC's - BLOG: Small Paragraph , But A life.
Small Paragraph , But A life.
ဆရာ မင်းသစ္စာရဲ့ သံလွင်အိပ်မက်မှာ နောက်ဆုံးရေးထားတဲ့ ဆောင်းပါး၁ပုဒ်ထဲမှ ကောက်နုတ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဆောင်းပါးနာမည်က ပုခက်လွှဲသောလက်သို့ပေးစာ ဆိုပါတယ်။ တိုက်ဆိုင်လွန်းလို့လားတော့ မသိဘူး ဖတ်ရတာ အရမ်းအားရလို့ ဒီမှာလာတင်ပေးလိုက်တာပါ။ =)
တက္ကသိုလ်နောက်ဆုံးနှစ်ရောက်စ ရည်းစားမရသေးသော၊ ရည်းစားရွေးရာတွင်ချေးထူသော ယောက်ျားလေးများ ပြောလေ့ရှိသည့်စကားမှာ မိန်းမပေါသလောက် အိမ်ထောင်ဖက်ရှားတယ်ဆိုသောစကားဖြစ်ပါသည်။ ယင်းတို့လေးစားမြတ်နိုးစွာ တစ်သက်လုံး ရှာဖွေကျွေးမွေး လက်တွဲသွားလိုသော မိန်းကလေးတွင် စိတ်ပိုင်း ဆိုင်ရာ အတွေးအခေါ်ဆိုင်ရာ အရည်အသွေးလေးတွေတော့ ရှိစေလိုကြသည်။ အချို့ မိန်းကလေးများမှာ ပေါ်ပင်နောက် လိုက်လွန်းသည်၊ အချို့ကတော့ ရှိသည့်အရည်အချင်းနှင့်မမျှ စိတ်ကြီးဝင်လွန်းသည်၊ အချို့ကတော့ မိမိကို ကြိုက်သည့်သူများတာကို သာယာလွန်းပြီး ယောက်ျားများမိမိကို မကြိုက်ကြိုက်အောင် အထာပေး ပဲပေးလွန်းသည်၊ အချို့မိန်းကလေးများက ဘဲရှုပ်လွန်းသည်၊ အချို့မိန်းကလေးများကတော့ ငွေနှင့် အရည်အချင်းရှိသော ယောက်ျားလေးများနောက် ကျားချောင်းချောင်းကာ မြှူဆွယ်အမိဖမ်းဖို့ ကြိုးစားသည်၊ အချို့မိန်းကလေးများမှာမူ မည်သည့်ရည်ရွယ်ချက် ရှိသည်မသိ အ၀တ်အစားပက်စက်လွန်းသည် စသည်ဖြင့် သူငယ်ချင်းချင်း ဆွေးနွေးတိုင်ပင် စာရင်းဖယ်လိုက်ပြီးသောအခါ မိကောင်းဖခင်သမီးများထဲမှ ကျန်တာထဲက ရွေးချယ်ရလေသည်။ ရုပ်ဆိုးလွန်းသောကြောင့် အထင်သေးကာ ပယ်သည်ဆိုမှာ ရှားပါသည်။ ရုပ်ဆိုးသော်လည်း စိတ်ကောင်းရှိသော သူငယ်ချင်းမများကို တန်ဖိုးထားတတ်ကြပါသည်။ တစ်သက်တာ ရိုးမြေကျပေါင်းဖက်လိုသော မိမိ၏ အိမ်ထောင်ဘက်ကို လေးစား တန်ဖိုးထားကာရွေးချယ်ကြသည်မှာ ယောက်ျားကောင်းများ ဖြစ်လေသည်။ ထို့ကြောင့် မိန်းကလေးများ မိမိကိုယ်ကိုတန်ဖိုးထားကာ ကိုယ်ပိုင်အရည်အချင်း အရရော၊ စိတ်ထားပိုင်ဆိုင်ရာအရပါ၊ ကျင့်ဝတ်သိက္ခာ စောင့်စည်းမှုတို့ဖြင့် မိမိတန်ဖိုးကို မြှင့်တင်ထိန်းသိမ်းပါက ယောက်ျားလေးများမှာလည်း ပေါ့ပေါ့တန်တန်နေရဲ ပြောရဲတော့မည် မဟုတ်ဘဲ အားလုံး စည်းစောင့်ကာ ကြိုးစားလာကြမည်ဖြစ်ပေရာ လူမှုအသိုင်းအ၀ိုင်းတစ်ခုလုံး၏ လူ့တန်ဖိုး သတ်မှတ်ချက် တစ်ခုလုံး မြင့်တက်လာမည်ဖြစ်သောကြောင့် " မိန်းမတို့ဣနြေ္ဒရွှေပေးလို့မရ " ဆိုသည့် ဆိုရိုးနှင့်အညီ ငွေနဲ့တန်ကြေး သတ်မှတ်မရနိုင်သော မိန်းမတန်ဖိုး မည်မျှကြီးကြောင်း သိရပါလိမ့်မည်။
အသေးစိတ်ကိုတော့ သံလွင်အိပ်မက်ရဲ့ နောက်ထွက်တဲ့ Issue#6 မှာ ဖတ်ရှုနိုင်ပါပြီ။ http://www.thanlwin.com/thanlwinainmat
ဝေဖြိုး ( ၂၉ မတ် ၂၀၀၆ )
Posted by Wai Phyo at11:28 AM
Error Correction4Previous Post
Me and Buddhism